THBP: ဖက်ချေကင်အမြိုးနဲ. မုန်.တီ
ထုံးစံအတိုင်း အားဗျယ်ဆိုကေ အိမ်မှာ မုန်.တီချက်ပါဗျယ်။ အရီးမ ကလေ့ ကြိုက် ကိုယ်ကလေ့ ကြိုက်။ သူမချက်ကေ ကိုယ်ချက်။ ကိုယ်မချက်ကေ သူချက်ဆိုခါ တစ်ပါတ် တစ်ခါလောက် စားဖြစ်နီရေ။ သူချက်စော်က ပိုလို.ကောင်းရေပယေ။း)
သူက ဗမာပြည်က အဂုမှ ပြန်ရောက်ခါ ဟင်းတိ အစုံအလင်ပါလာရေ။ မုန်.တီချက်ဖို. ဆိုပြီးကေ လကျောက်သားကင်လို.ယူခရေ။ ဖက်ချေ ကင် ပ။ ယင်းချင့်ချေနဲ.မု.န်.တီလုပ်ပလိုက်စော် ချိုသလားလို.မမီးကေ။ သင်္ဘောထိုးနဲ.ချက်စော်ထက်ပင်ကောင်းရေဂါ။ သူက ငရုတ်သီးအခြားမလုပ်ပျယ်။ အားလုံးရောပြီးကေ အာပူလျှာပူလုပ်ပလိုက်စော်ဆိုခါ။ ကောင်းသလားမမီးကေ စစပ်ချေနဲ။ ငပိအတန်၊ ဆားအတန်၊ ငရုတ်အတန်နဲ. ကကောင်းကောင်းပိုင်တွိရေဂါ။ စားလီဂတ်ပါ။ အောက်မှာ ဓါတ်ပုံတင်ပီးလိုက်ပါယင့်။